Author Topic: Rekha Thapa (रेखा थापा) Nepali Actress (Read 273431 times)
« Reply #30 on: October 20, 2009, 01:26:09 PM »
चलचित्र 'आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ' को छायाँकनको क्रममा फुर्सदको समयमा ठट्टा गर्दै नायक बिराज भट्ट, नायिका द्वय अरूणिमा लम्साल र रेखा थापा ।
« Reply #31 on: October 21, 2009, 11:55:28 PM »
रेखा थापा सपनै देख्दिनन्, देखेपछि पूरा भइछाड्छ । चाहे त्यो निदाएको बेलाको सपना होस् या ननिदाएको बेला । ननिदाएको बेलाका रेखाका हरेकजसो सपनारूपी महत्त्वाकांक्षा पूरा हुँदै आएका छन् । उनको जपनाको सपना थियो- काठमाडौं गएर फिल्म खेल्न पाइयोस्, जो पूरा भयो ।
ड्याडी भन्ने गरेका निर्माता छवि ओझासँग बिहे गर्ने सपना थियो, त्यो पनि साकार भयो । नेपाली चलचित्रक्षेत्रमा एक नम्बरको हिरोइन बन्न पाइयोस् भन्ने कामना गरेकी थिइन्, चलचित्रक्षेत्रले त्यो पनि पूरा गरिदियो । सबै सपना पूरा भएपछि अब निदाएका बेलासमेत सपना नदेख्नुपर्ने हो तर उनी सपना देखिहाल्छिन् ।
पहिलेपहिले मस्तले निदाएका बेला हिरोइन बनेको सपना देख्थिन् रे, त्यो विपनामा परिणत भयो । केही समयदेखि उनी अनौठाअनौठा सपना देख्न थालेकी छिन् । उनी कहिले भूतले लखेटेको सपना देख्छिन् त कहिले र्सपले खेदेको, कहिले बाघले टोक्न आएको सपनाले डराउँछिन् त कहिले त्योभन्दा पनि भयानक सपनाले उनको न्रि्रा खलबलिन्छ । डर के छ भने हिजोका दिनमा हिरोइन बनेको सपना देखेकी उनका अहिलेका पछिल्ला सपना पनि मिले भने ?
« Reply #32 on: October 24, 2009, 01:04:28 AM »
सर्पसँग रेखाको रोमान्स
शुक्रवार, 23 अक्टोबर 2009 17:47 नागरिक
सन्तोष रिमाल- साँझ छिप्पिँदै गएपछि हिन्दी र अंग्रेजी गीतको 'भोल्युम' बढ्ने सुन्धाराको बेबिलोन डिस्को बिहीबार दिउँसैदेखि 'चर्को' सुनिन्थ्यो। तर, विदेशी हैन नेपाली गीतले। त्यहाँ ग्राहक थिएनन्। तर, अन्डरग्राउन्डको डिस्को थेक खचाखच थियो। 'डिस्को लाइट'को प्रकाश त्यहाँ पर्याप्त थिएन। पिरो धुवाँमा थप रंगीन प्रकाशको व्यवस्था थियो। र, त्यहाँ चम्किएकी थिइन् हिरोइन रेखा थापा।
'काला कृष्णजी आऊ न, बजाऊ बाँसुरी
यो प्यासी राधे, यो दासी राधे
नाच्छे अब नागिन जसरी'
निकै हाउभाउ र कटाक्ष प्रस्तुत गर्दै उनी कृष्णलाई आकर्षित गर्न खोज्दै थिइन्। तर, उनको पुकार सुन्ने कृष्ण त्यहाँ थिएनन्। न त १६ सय गोपिनीले नै उनलाई साथ दिएका थिए। थिए त उनको सौन्दर्यले मोहित केही कछाडधारी भिलेन। ठूलै अपराध गरेर भागेका ती पात्रलाई रेखाको भड्किलो नृत्यले त्यहीँ अल्मल्याएको थियो। तर, रेखाको ध्यान तिनमा थिएन। बरु उनी सर्पसँग 'रोमान्स' गर्दै थिइन्। कहिले यता फर्काउँदै, कहिले उता फर्काउँदै, कहिले मुसार्दै। उनको सबै अंगमा सल्बलाउन सर्पलाई छुट थियो।
रेखा 'नागिन' बन्ने जमर्को गर्दै थिइन्। तर, नृत्यनिर्देशक वसन्त श्रेष्ठलाई सर्पसँगको उनको रोमान्स चित्त बुझेन। 'केही गर्दैन यो सर्पले। नडराई नाच,' उनले निर्देशन दिए।
'विराटनगरमा छँदा गोमनसँग त डराइएन, यस्तो सर्पसँग को डराएको छ र,' रेखाले जवाफ फर्काइन्। फिल्ममा पहिलोपटक सर्पसँग खेलेपनि आफूलाई डर नलागेको उनले बताइन्। 'सर्प धेरै हुने ठाउँको मान्छे म, गाउँमा सर्प नचाउन ल्याउँदा पनि चलाउँथें,' आफूलाई 'बहादुर' बनाउने प्रतिक्रिया दिएपछि उनी फेरि नाच्न थालिन्।
'यहाँ सर्पलाई कृष्णको प्रतीक बनाइएको छ,' फिल्म 'आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ'को यो गीतबारे श्रेष्ठले भने, 'केही नयाँपन दिउँ भनेर सर्पको प्रयोग गरिएको हो।' यसो गर्दा गीत छिटै हिट हुने उनको विश्वास छ।
सेटको वरपर घुमिरहेका निर्देशक ऋषि लामिछाने श्रेष्ठको भनाइसँग सहमत देखिए। 'फिल्म यस्तै चिजले चल्छ। फेरि सर्प त शब्दको पनि माग थियो,' उनले भने। यो गीतपछि फिल्मको सम्पूर्ण सुटिङ सकिने निर्देशक लामिछानेले बताए। यो फिल्ममा बिराज भट्ट र अरुणिमा लम्सालले समेत मुख्य भूमिकामा अभिनय गरेका छन्।
« Reply #33 on: October 27, 2009, 03:04:14 AM »
« Reply #34 on: October 29, 2009, 11:58:13 PM »
2006, on HIMMAT movie promotion - Pokhara
« Reply #35 on: November 05, 2009, 07:08:04 AM »
Rekha and Biraj
« Reply #36 on: November 13, 2009, 09:18:40 AM »
चलचित्र 'कसम हजुर' को मा नायक राजबल्लभ कोईराला, जीवन लुईटेल र नायिका रेखा थापा एक-आपसमा जिस्किँदै ।
माओवादीको सिंहदरवार घेराउ कार्यक्रममा गीत गाएर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई नचाउदै नायिका रेखा थापा ।
« Reply #37 on: November 13, 2009, 10:44:48 AM »
This is what u call 'shit bloddy opportunists'!
« Reply #38 on: November 13, 2009, 01:31:00 PM »
Quote from: thulomulo on November 13, 2009, 10:44:48 AM
Pragy Pratisthan or nachghar or film board or testai kunai ko job pakka !!
« Reply #39 on: November 20, 2009, 08:59:00 PM »
रेखाको नागरिक सर्वोच्चता हनन भयो रे
काठमाडौं। नेपाली चलचित्रकी सबैभन्दा ग्ल्यामर्स नायिकाको छवि बनाएकी रेखा थापा माओवादीमा प्रवेश गरेकी छन्। माओवादीले घोषणा गरेको दोस्रो चरणको आन्दोलनको अन्तिम कार्यक्रम सिंहदरबार घेराउमा भद्रकालीमा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड सँगसँगै नाचेर आफू माओवादीमा प्रवेश गरेको उनले पुष्टि गरेकी हुन्। उनले प्रचण्डसँग कुममा कुम मिलाएर नाचेकोमात्र होइन, नागरिक सर्वोच्चता हनन भएको र त्यसको लागि राष्ट्रपतिको कदम सच्चिनुपर्ने भाषणसमेत गरिन्। तर उनको भाषण सुन्नेहरू सबै छक्क परेका छन्, रेखाको कसरी नागरिक सर्वोच्चता हनन भयो भनेर। सडकमा हिँड्दा उनले छोटो लुगा लगाउन पाएकै थिइन्, प्रायः चलचित्रमा उनले वान पिस कपडा लगाउन पाएकै थिइन्। मनमा लागेका कुरा जसलाई पनि भन्न पाएकी थिइन्। यस्ता हर्कतमा छुट पाएकी रेखाको भनाइ सुनेपछि चलचित्र क्षेत्रमा यस विषयले ठूलो चर्चा पाएको छ।
२६ गते भद्रकालीमा प्रचण्डले घेराउ कार्यक्रमको नेतृत्व गरेका थिए भने अन्य सात ठाउँमा पनि माओवादीले घेराउ कार्यक्रम राखेका थिए। तर रेखा भने प्रचण्डले नै नेतृत्व गरेको कार्यक्रममा पुगिन्। चलचित्र प्रहारको सुटिङ नै छाडेर आएको बताउने रेखाले सुरुमा संगीतकार चेतन सापकोटाले घेराउ कार्यक्रममा बोलाएको बताएकी थिइन्। तर समाचार स्रोतअनुसार सुटिङ युनिटलाई जसरी पनि माओवादीको कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्छ भन्दै उनले आफ्ना नजिकका नायक, नायिका, गायक, गायिकालाई आमन्त्रण गरेको बताइन्छ। उनका सहकर्मीले माओवादी विचारसँग आस्था राखे पनि सार्वजनिक आन्दोलनमै नजान सुझाव दिएका थिए।
स्मरणीय छ, केही समयअघिमात्र रेखा पति छवि ओझा माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए। तर त्यसबेला रेखा औपचारिक रूपमा माओवादीमा प्रवेश गरेकी थिइनन्। केही कलाकार माओवादीमा प्रवेश गरेको खबरले सिनेक्षेत्रमा व्यापक चर्चा परिचर्चा चलेको थियो। माओवादीमा प्रवेश गर्ने कलाकार, निर्माता, निर्देशक, नायक, नायिका तथा संगीतकारहरूको अवस्था अहिले ज्यादै नाजुक छ। हिजो फटाफट चलचित्रमा काम पाइरहेका ती चलचित्रकर्मी अहिले माओवादी आन्दोलनमा सहभागी हुन सडकमा कुदिरहेका भेटिन्छन्। उनीहरूको हात एकाध चलचित्रमात्र छ।
यसैबीच, रेखाले माओवादी आन्दोलनमा सहभागी जनाएपछि चलचित्र क्षेत्रमा उनको दिन सकिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। यसअघि नाम चलेका नायकहरूसँगको विवादका कारण उनले चलचित्र पाउनै छाडेकी थिइन्। केही सानो ब्यानरका चलचित्रमा फाट्टफुट्ट चलचित्र पाए पनि ती चलचित्रले राम्रो व्यापार गर्न नसकेका कारण रेखालाई आफ्नो चलचित्रमा लिन निर्माता/निर्देशक हच्किएका हुन्। सार्वजनिक रूपमै माओवादी कार्यक्रममा सहभागी हुन थालेपछि रेखा थापा अभिनित चलचित्र अन्य पार्टीसँग आस्था राख्ने दर्शकहरूले नहेर्ने चेतावनी आउन थालेको छ। हिजो राजसंस्था अस्तित्वमा रहँदा राजसंस्थाले नेपाली चलचित्र उद्योगका लागि ठूलो योगदान दिएको भन्दै उसको तारिफ गर्ने चलचित्रकर्मी अहिले माओवादीले राजसंस्थाकै जस्तो योगदान दिएको बताउँदै हिँड्न थालेका छन्। यसो भन्नेमा रेखा थापा पनि पर्छिन्। यसै साता उनले एभिन्युज र माओवादीद्वारा सञ्चालित एबीसी टेलिभिजनसँग कुराकानीका क्रममा माओवादी ठूलो पार्टी भएको र देशभरि उसका थुपै्र कार्यकर्ता रहेको बताउँदै माओवादीले चलचित्र उद्योगका लागि धेरै काम गरेका भन्दै उसको तारिफ गरिन्। तर चलचित्र उद्योगका लागि उसले के के राम्रो काम गर्योो भन्ने कुरा उनले बताउन चाहिनन्।